စားဘဲကြီးနဲ့ဂွင် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on January 20, 2021 Author admin	Comments Off on စားဘဲကြီးနဲ့ဂွင်
ကျတော့်ကောင်မလေးက ဘဏ်ဝန်ထမ်း ကျတော်က ချစ်စနိုးနဲ့ နှင်းလို့အဖျားဆွတ်ပီးခေါ်တယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကပြောစရာမလို ရုပ်လေးကလည်း ခပ်ချောချောဗျ။ ကျတော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးထားတော့ ရင်းနှီးနေကြပီ။ ကျတော့်သူငယ်ချင်းတွေဆို တခါတလေ လူစုံချိန် “ဟျောင့် မင်းဆော်မပါဘူးလား” အမြဲမေးခံရတယ်။ အစကသတိမထားမိဘူး နောက်မှ မသာကောင်တေကဆော်ပါလာလို့ကတော့ ဆော်ဖင်က မျက်စိမခွာကြဘူး။ နှင်းကလည်း ဖင်လေးကို ကားပီးကိတ်နေတော့ ထမိန်အကျပ်နဲ့ဆို ဘစ်ရာကထင်းနေတာ။ ဒါကြောင့် မသာလေးတေ မေးနေတာ။ ကျတော်လည်းစိတ်မဆိုးမိဘူးဗျ ဘာကြောင့်မသိ။ ကျတော်ဖေ့ဘုတ်မှာ ဆော်နဲ့နှစ်ယောက်တွဲပုံတင်ရင် ဆော်က စကက်အတိုဆို ဒီကောင်တေမထိတထိမန့်ပီ။ကျတော်လည်း ဉဆိုပြန်တွေးပီးဖီးရှိသလို ခံစားလာရတယ်။ ဒါနဲ့ ဆော်ကိုတင်အသားပေး ဆက်စ်ဆီ ဆန်ဆန်ပို့စ်တေ ပေးခိုင်းပီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်တင်တင်ပေးတယ်။
သတိထားမိတာက ဆော်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဂျာကြီးက ပုံတိုင်း လိုက် ပေးထားတယ်။ မလွတ်စေရဘူး။ ဆော်နဲ့ ချိန်းလိုးတဲ့တနေ့ လိုးပီးခန နားချိန် ကျတော်စကားစလိုက်တယ်။ “နှင်း ဂျာကြီးက နှင်းကိုကြွေနေပုံပဲ” “ဘာလို့လဲ ကိုရဲ့” “နှင်းရဲ့ အိုးပုံတေတိုင်း သူကြည့်တယ်” “ဟုတ်လား သူကနဂိုထဲကနှာဘူး ” “နှင်း သတိထားကြည့် ဒီလူကြီး နှင်းကိုစားချင်နေတာဖြစ်မယ်” “ဟာ ကိုကလဲ” “အဲ့လူကြီးက လီးကြီးမယ့်ပုံကွ နှင်းရဲ့” “ဟုတ်တယ်နော် ကို အမလေး” “ဘာဖြစ်တာလဲ နှင်း” “အဲ့လိုကြားတာ အူယားလို့” “ပြစမ်း နှင်းစက်ပက်လေး” “အ ယားတယ်” စောက်ရည်တောင် စိုပြန်စိုနေပီ အခုပဲလိုးပီးတယ်။ “ကို ကိုခုနဟိုလူကြီးအကြောင်းပြောတာ နှင်းမျက်စိထဲ ပုံဖော်မိတယ်” “ဟုပီ ကိုနှင်းစက်ပက်ပွတ်ရင်း အဲ့လူကြီးအကြောင်း ပြောပြမယ်” ကျတော်နှင်းစက်ပက်လေးကိုပွတ်ရင်း “နှင်း အဲ့လူကြီးလီးကတုတ်တုတ်ကြီး အခြေကခြောက်လက်မကျော်လောက်တယ်”။
အင်း…..အဲ့လူကြီးကလေ နှင်းအိုးပုံကြီးတွေကြည့်ပီး သူ့လီးကိုင်ဂွင်းထုမှာကွ “အိုးးးးဟုတ်လား ကိုရယ်” “သူဂွင်းထုနေတဲ့ချိန် နှင်းကိုလေးဖက်ထောက်ပီး သူနောက်က အားရပါးရသူ့လီးကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတာ တွေးရင်းထုမှာ” “အားးးးရှီးးးး” “နှင်း စက်ပက်လေးက်ိုလည်း သူ့လျှကြမ်းကြီးနဲ့ ပလက်ပလက်မြည်အောင် ယက်မှာသေချာတယ်” “အ အ အားးးးရှီးးးပီး ပီးးပီ” “နှင်းဘယ်လိုလဲ” “အရမ်းကောင်းတယ် ကိုရယ်” “နှင်းအဲ့လူကြီးလိုးတာ ခံကြည့်ပါလား ” “အေနော် ကိုပြောတာ နှင်းအဲ့လူကြီးနဲ့ငြိမှမငိုနဲ့” “ကိုက တကယ်ပြောတာ” “ဟာကိုကလည်း နှင်းကိုမချစ်တော့လို့လား” “နှင်းရယ် မချစ်တာမဟုတ်ဘူး နှင်းလေးကို ခံစားစေချင်တာ” နှင်းလည်း ဘာမှမပြောပဲ ခနငြိမ်သွားတယ်။တခုခုတွေးနေသလိုပဲ။ ကျတော်လည်း “နှင်း ခုနအတွေးနဲ့တောင် နှင်းလေး တအားကောင်းနေတာ” “အင်းနော်” “ကိုက နှင်းလေးကောင်းတာကြည့်ပီး အရသာတွေပိုရှိတယ်” “တကယ်လား ကို” “တကယ်ပေါ့ နှင်းရဲ့နှင်းတို့သာ ကို့ရှေ့ တကယ်လိုးနေတာမြင်ရင် ကိုကတော့ လရည်ပန်းထွက်လောက်တယ်” နှစ်ယောက်သား တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။
ကျတော်ပဲ ပြန်စပေးလိုက်တယ်။ “နှင်း ရင်ထဲရှိတာပြော ကိုမေးမယ်” “အင်း မေး” “နှင်း အဲ့လူကြီးအလိုးခံချင်လား” “နှင်းးးး ခံတော့ခံစားကြည့်ချင်မိတယ် ဘယ်လိုလိုးမလဲ လည်း သိချင်တယ်” “ဟုတ်ပီ ကိုခွင့်ပြုတယ် နှင်းသူ့ကိုအရောခံပီး ကျွေးလိုက်” “တကယ်လား ကို” “တကယ်ပေါ့ ” “အမလေး ရင်ခုန်လိုက်တာ.. ကိုက ဘယ်လိုကြည့်မှာလဲ နှင်းတို့လိုးတာ” “နှင်းတို့ အဆင်ပြေလို့ဒိတ်မယ်ဆို ကို့ကိုပြော” “အိုကေ” ဒီလိုနဲ့ မန်နေဂျာဘဲကြီးကို နှင်းသတိထားမိတယ် အလုပ်ထဲ။ အဆီတဝင်းဝင်းမျက်နှာကြီးနဲ့ တဏှာအပြည့်မျက်လုံးတေက နှင်းဖင်ကြီးတေကနေ မခွာဘူး။ နှင်းကလည်း မသိမသာကော့ပြ သူရှေ့ဖင်ကြီးကို တုန်နေအောင် လမ်းလျောက်ပြ လုပ်ပြမိတယ်။ တနေ့ အဲ့လူကြီးက အလုပ်အပြန် “နှင်း ဒီနေ့လာမကြိုဘူးလား အိမ်က” “ဟုတ် ဂျာကြီး” “လာလေ ကိုကြီးကားနဲ့လိုက်ပို့မယ်” နှင်းလည်း မငြင်းဘူး အခွင့်ရေးဆိုတော့။ သူက စလာတယ်။
“နှင်း ကိုကြီးတို့ဆုံတုန်း မုန့်လိုက်ကြွေးမယ်” “ဟုတ် ဂျာကြီး” “ဂျာကြီးလုပ်မနေနဲ့ ကိုကြီးပဲခေါ်” “ဟုတ်” တိတ်ဆိတ်ပီးစကားပြောလို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးကို ဝင်လိုက်တယ်။ အတွဲဆိုင်ဖြစ်မယ် နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာနဲ့စားပွဲတစ်လုံး ဘေးနှစ်ဖက် အလုံ ရှေ့အဝင်ပေါက်က ခန်းစီးလေးကာထားတယ်။စားသောက်စရာတွေမှာပီး စားရင်း စကားပြောနေတာပေါ့ ။ ” နှင်း နှင်းကောင်လေး လာမကြိုတာကြာပီနော်” “ဟုတ်တယ် ကိုကြီး အဆင်မပြေဘူး သူနဲ့” “အော် နှင်းတို့ ချစ်သူ သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပီလဲ” “နှစ်နှစ် ကိုကြီး” “မဆိုးပါဘူး” “အမ် ဘာမဆိုးတာလဲ ကိုကြီး” “နှစ်နှစ်ဆိုတော့လေ သက်တမ်းရှည်တာပေါ့ ခုခေတ်အနေထားနဲ့ဆို” “ဟုတ်” “ခုခေတ်လူငယ်တွေက စားပီးနားမလည်တွေ တစ်လ နှစ်လဆိုပြစ်သွားတတ်ကြတာလေ” “ဟုတ်” “နှင်းတို့က နှစ်နှစ်ဆိုတော့ နှင်းကောင်လေးကစားပီး နားမလည်ထဲကတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး နော်” “ဟုတ် ဟာ မဟုတ် အဲ့လို ဟိုမစားပါဘူး”။
ဟားးးနှင်းကတော့ လုပ်ပီ ဒီခေတ်မှာ ဒါက အဆန်းမှမဟုတ်တာ” “ကိုကြီးကလဲ ဘာတေပြောနေမှန်းမသိ အု” ပြောရင်းအအေး ငုံစုပ်လိုက်တာ သီးပီး နှင်းရင်ဘတ်တေစိုသွားတယ်။ ဘဲကြီးကလည်း လက်သွက်ချက် ဇက်ခနဲ တစ်ရှူးလှမ်းယူပီး နှင်းရင်သားပေါ်သုတ်ပေးတယ်။ အစက ရိုးရိုးသားသား သုတ်နေပေမယ့် နှင်းကမငြင်းမိတော့ နှင်းတို့တွေကို ပွတ်ပွတ်ဆွဲပီး မသိမသာနယ်တယ်။ “ကိုကြီး ရပီလေ” “အယ် ဟုတ်သား ဈာန်ဝင်သွားလို့” “အာ ရှက်လိုက်တာ ဘာတေပြောနေမှန်းမသိ” လွယ်တယ်ထင်ချင်လည်းထင် နှင်းက မြောင်းတေလှိမ့်ပေးပစ်ပီ။ သူရဲလာပီး နှင်းပုခုံးကို ဖက်တယ်။ “နှင်းလေး ချစ်သူနဲ့မနေရတာကြာပီမှတ်လား” “အာ ကိုကြီးကလည်း” “နှင်းလေးချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေတုန်း ကိုကြီး ယုယပေးချင်တယ်” ပြောလည်းပြောနှုတ်ခမ်းတွေစုပ် နို့တွေနယ်ပေါ့ ။ နှင်းလည်း သူ့အပြုစုတွေကြားမျောမိတယ်။ “နှင်းဖင်ကြီးတွေ ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် ကိူကြီး ကိုင်ချင်နေတာကြာပီ” ။
သူ့ဖက်ဆွဲဆောင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ပီး နှင်းဖင်ကြီးတွေ ဆုပ်ဆုပ်နယ်တာ နှင်းပင်တီလေးမှာ စောက်ရည်တွေ ချွဲလို့။ အဲ့လိုအနှူးအနှပ်နဲ့ပဲ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ကျတော့်ဆီ နှင်းဖုန်းဝင်လာတယ်။ “ဟဲလို နှင်း” “ကိုရေ အိုကေပြီနော် ” “ဟာတကယ်” “တကယ်ပေါ့ ကို နေရာစီစဉ်လိုက်တော့” နေရာက လိုးနေကျတည်းခိုခန်း လိုးနေကျ အခန်းပေါ့ဗျာ။ နှင်းနဲ့ကျတော်လိုးတိုင်း အဲ့အခန်း အခန်းနံရံမှာ ဘေးအခန်းကိုချောင်းဖို့ ကျတော်ကိုယ်တိုင် အပေါက်လေး ဖောက်ထားတာ။ တော်ယုံမသိသာဘူး သတိမထားမိဘူး။ အဲ့နေ့ရောက်တာနဲ့ ကျတော် ဘေးအခန်းယူလိုက်တယ်။ သူတို့ကတော့ လိုးနေကျ အခန်းပေါ့။ ကျတော်ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်လေးကနေ ကျတော်ချောင်းနေတုန်း နှင်းနဲ့ဘဲကြီး အခန်းထဲဝင်လာတယ်။ ကုတင်နားရောက်တာနဲ့ ဘဲကီးက နှင်းကို အငမ်းမရဖက်ပီး ကစ်စင်ဆွဲတော့တာပဲ။ အားးကြည့်လိူ့ကောင်းချက်ဗျာ။
နှင်းဖင်ကြီးတွေနယ်နယ်ပီး ကစ်စင်ဆွဲနေတာများ အားရစရာကြီး။ “နှင်းလေး ကုတင်ပေါ်လှဲလိုက်” နှင်းကလဲ ဘဲကီးပြောတဲ့အတိုင်း ကုတင်ပေါ် ပလက်လှန်လိုက်တယ်။ ဘဲကီးက နှင်းထမိန်ကို ဆွဲလှန်ပီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရယက်တော့တာပဲ။ “ရှီးးးးအားးးကိုကွီးရယျ အိုးးးးသပေါပီ” ဘဲကြီးက အမှုတ်တော်တော်ကျွမ်းတယ်။ နှင်းခမျာ ကော့တက်လို့။ “အီးးးးလုပ်တတ်လိုက်တာကိုရီးရယ် အားးးးရှီးးး” “နှင်းလေးကို ဟိုကောင် ခုလိုမယုယဘူးလား” “လုပ်တယ်ကိုရီး ကိုရီးလောက် မကောင်းဘူး” “ဟားးးကိုရီးကိုစွဲသွားပီလား” အားးးအပြောအဆိုတေနဲ့တင် တဂွင်းပီးတော့မယ် ။အခန်းထဲဝင်ပီး ဘေးကသာ ထိုင်ကြည့်ချင်မိတော့တယ်။ ဘဲကြီးက နှင်းဘေးဝင်လှဲပီး နှင်းကိုကစ်စင်ဆွဲရင်း နှင်းလက်ကို သူ့လီးကြီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ နှင်းကလည်း မလုပ်ခင်ကသာမူတာ ခုကျတော့လီးကြီးကို ပွတ်သပ်ပီး ဂွင်းထုပေးနေတာများ မြင်တဲ့လူတောင် လရည်ထွက်လောက်တယ်။
ဘဲကြီးက “နှင်းလေး ဟိုကောင့်ကိုစုပ်ပေးဖူးလား” “ဟုတ်” “ကိုကြီးကိုရော မစုပ်ပေးချင်ဘူးလား” “စုပ်ပေးမှာပေါ့ ကိုကြီးရဲ့” ဟာ ငါ့ဆော်ဒီဘဲကြီးလီးစုပ်တော့မယ် အားးး ဖီးတက်လိုက်တာကွာ။ နှင်းလည်း ဘဲကြီးပေါင်ကြား ဒူးထောက်ပီး လီးဒစ်ကြီးကို ပြွတ်ခနဲနမ်းလိုက်တယ်။ ပီးတာနဲ့ ငုံပီးစုပ်တော့တာပဲ။ “အု အု” “ရှီးးးးအားးးနှင်လေးရယ် အားးးး” ဘဲကြီးလဥနှစ်လုံးကို နှင်းကဖွဖွလေးပွတ်ပီး ပါးစပ်အပြည့်လီးကြီးကို ကုန်းကုန်းစုပ်နေတာများ ဖီးအရမ်းတက်တာကြည့်ပီး “အားးးနှင်းလေးရယ် ရှီးးးအားးး နှင်းလေး ကိုကြီးလိုးချင်ပီကွာ ကုန်းပေး” “ဟုတ် ” မှန်းမှန်းထုနေရတဲ့ နှင်းလေးဖင်လုံးကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပီး လိုးရတော့မယ်။ နှင်းလည်း လေးဖက်ထောက်ကုန်းပီး ဖင်ကိုထောင်နေအောင် ကော့ပေးလိုက်တယ်။ ဘဲကြီးက စားတော့ ဝါးတော့မယ့်ရုပ်ကြီးနဲ့ နှင်းနောက်ကနေ ဒူးထောက်ပီး သူ့လီးကြီးကိုဗြစ်ခနဲ ထိုးထဲ့လိုက်တယ်။ “အ အမလေး ဖြေးဖြေးကိုကြီး” “နှင်းလေးကောင်က ကိုကြီးလောက်လီးမကြီးဘူး ထင်တယ် စောက်ဖုတ်လေးကိုကြပ်နေတာပဲ”။
“အ အားးးအီးးး” ဘဲကြီးကဖြေးဖြေးမှန်မှန်နောက်ကနေ နှင်းစောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းနေတယ်။ ဖင်ကြီးတွေ နယ်နယ်ပီး “နှင်းလေး ကိုကြီးလီးကိုကြိုက်လား” “အားးးးအကြိုက်တယ် ကိုကြီးရယ်” “ကိုကြီးလီးနဲ့ဟိုကောင့်လီး ဘယ်လီးပိုကြီးလဲ” “ရှီးးးးအားးးကိုကြီးလီးပေါ့” အားးးကျတော် အရမ်းဖီးတက်သွားတယ်။ လီးကြီးပါ ကျင်တက်လာတယ် လက်ကိုလည်း မြန်မြန်လေးကစားလိုက်တယ်။ “နှင်းလေး ကောင်းလားကိုကြီးလိုးပေးတာ” “အ အားးးအရမ်းကောင်း” “ဘယ်လိုဆောင့်ပေးရမလဲနှင်း ပြောပါဦး ကိုကြီးကို” “ရှီးးးးအားးးမြန်မြန်လေးဆောင့်ပေးပါတော့” ဘဲကြီးလဲအားရသွားပုံပဲ လီးတဆုံးထဲ့ပီး တဖျောင်းဖျောင်းဆောင့်လိုးတာ။ ကျတော်ကလည်း တပလောက် ပလောက်နဲ့ထုတာကြည့်ပီး “အားးးရှီးးကိုကြီးရယ် ” “အင့် အင့်ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်လေး” “အားးးးကိုကြီးရယ် အရသာရှိလိုက်တဲ့လီးကြီးကွာ” “ရှီးးးးအားးးကိုကြီးလရည်တေပန်းထဲ့ရမလား” “ထဲ့ကွာ ရှီးးးးအားးးအားရပါးရသာပန်းထဲ့” “အင့် အင့် အ အ အိုးးးး” “အီးးးက ကိုကြီး အီးးး အ အပီးပီ အားးနှင်းပီးပီ” ကျတော်ကလည်း တဖက်အခန်းထဲကနေ အားးးအူးးးဆိုပီး ရှေ့ကနံရံပေါ်လရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်…. ပြီးပါပြီ။
ကျနော်ကျော်ထက် ပါဘဝမှာဆင်ခြင်စရာ တွေမလုပ်သင့်တာ တွေလုပ်မိတဲ့အတွက်နောင်တတွေတလှေကြီး ရပေမယ့်အခုတော့ပြင်မရတဲ့ ကိစ္စတွေနှင့်နပမ်းလုံးနေရဆဲပါ၊၊ ကျနော်အရင်ကဦးစီးဌာနတစ်ခုရဲ့ ဦးစီးအရာရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။အားလုံး ကျနော့်အကြောင်းလေး သိရအောင်ဖတ်ကြည့်ကြအုံး။ ကျနော်ဘွဲ့ရတော့ဌာနအလုပ်ဝင်တယ်ဒုဦးစီးမှူးရာထူးရတော့ကျနော်အိမ်ထောင်ပြုချင်နေပြီ၊၊ကျနော်ယူမည့်မိန်းမကသိပ်အချောကြီး တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။သူတို့မှာ ညီအကိုမောင်နှမခြောက်ယောက်ရှိတယ်၊၊ သူကလွဲလို့အားလုံးကျောင်းတက်နေကြ တာပေါ့၊၊သူ့အောက်ကညီမကဆယ်တန်း အောင်တော့အသက်က နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့မောင်တွေညီမတွေက ငယ်သေးတယ်၊၊မောင်ဆိုရှစ်တန်း လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေကနှစ်နှစ်ကြီး နှစ်နှစ်ငယ်တွေ၊၊ကျနော်တို့ဌာနက အစကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်ညွှန်ချုပ် အသစ်ရောက်လာတော့သူက အရင်လူလိုအဟုတ်ပဲတကယ်လည်း အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်၊၊ အဓိကအလုပ်ကကျူး တွေဖယ်ပြီးမြေသိမ်းတာပေါ့၊၊ မတရားတော့မဟုတ်ဘူးပေ နှစ်ဆယ်တကွက်ကိုဆယ်သိန်းပေးပြီးတော့ပေါ့၊၊ အဲဒီတုန်းကဒိုင်နာတစ်စီးမှခြောက်သိန်း၊ လူတွေကဖယ်ပေးတဲ့လူတွေများတယ်၊ အချို့ကတော့မဖယ်ပေးဘူး၊၊
မင်ဒီ့ရဲ့ လက်ကလေးတဖက်က သူ့ပေါင်ကြားက မာန်ဖီထကြွနေတဲ့ ဖွားဖက်တော်ကို လှမ်းဆုပ် ကိုင်ညှစ်လိုက်တာကို သိလိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်ကို တက်လိုက်ကြတဲ့အချိန် မင်ဒီက “ မင်းကို စုတ်ချင်တယ် . . ” လို့ အသံ တုန်တုန်လေးနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း အထစ်ကို ဖမ်းငုံလိုက်တယ် ။ မင်ဒီ ခါတိုင်းလို မဟုတ်ဘဲ တမျိုးဖြစ်နေတယ် ။ မင်ဒီရဲ့ ပီပြင်တဲ့ စုတ်ချက်နဲ့ လျာကစားပေးတာတွေကြောင့် ပါးစပ်က ညည်းမိရတဲ့အထိ ခံလို့ တအား ကောင်းနေတယ် ။ မင်ဒီရဲ့ အစုတ်အယက်တွေက ခါတိုင်း ပေးဘူးတာတွေထက် ပိုပြီး ပီပြင်နေတယ် ။ “ အား………အင်း………. အိုး…….အား…….အား.. ….” […]
ကျတော်ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရန်..ရန်ကုန်မြို့သို့..တက်လာပါသည်။ဦးလေးအိမ်ရောက်တော့..ဦးလေးမိန်းမ..မတင်မေနဲ့ပဲတွေ့တယ်.. သူ့ယောက်ကျား…အညာဘက်မှာ.. အာလူး ၊ကြက်သွန်သွားတင်တယ်။ ဦးလေးပြန်လာမှ..အလုပ်ရှာပြောတယ်။ ခဏနေတော့..ဦးလေးဆီဖုန်းဆက်တယ်.. ကျတော်ရောက်နေတဲ့အကြောင်း… ဘာတွေပြောလဲတော့..မသိဘူး။ပြီးမှ..” မင်းမင်း ရေ..နင့်ဦးလေးက..အိမ်မှာပဲနေ.. ဘယ်မှမသွာနဲ့တဲ့..ငါ့နဲ့လောလောဆယ်.. ဈေးဝိုင်းရောင်းတဲ့..သူ ပြန်လာရင်..အလုပ်ရှာပေးမယ်တဲ့”.. ”ဟုတ်..မမတင်မေ..”ကျတော်က.. တောကတက်လာတဲ့သူဆိုတော့.. ရန်ကုန်အိမ်လေးက..ကျတော့အတွက် ကျဉ်းနေသလိုပဲ…ဘယ်တက်နိုင်မလဲ.. ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ချင်တာကို… ရပ်ကွက် ဆိုင်ဆိုတော့.. ဝယ်သူတော့များသား… တနေ့တနေ့..ဈေးရောင်းလိုက်.. အိမ်အလုပ်ကူလုပ်လိုက်နဲ့..အချိန်တွေ ကုန်နေတယ်…။
“ကမြမှာ ဗိုကျကွီးနဲ့ ကလေးတယောကျနဲ့”နငျတခုခုဖွဈသှားရငျ ငါရငျကြိုးမှာလို့ မနညေ့ကတငျ ပွောနတော ( ရုပျသံ )